web 3.0 သို့မျှော်ကြည့်ခြင်း - MYSTERY ZILLION
web 3.0 သို့မျှော်ကြည့်ခြင်း
September 2009 edited May 2010 in My Article
အရင်ဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားကြည့်မယ်вЂ¦ ပြီးရင် တစ်ခုခုစားမယ်вЂ¦ ဟာသကားကိုကြည့်မယ် ပြီးရင် မက္ကဆီကန် အစားအစာတစ်ခုကိုစားမယ်вЂ¦ သင်အဲဒီလိုတွေးနေတုန်းမှာ ကွန်ပျူတာကို စဖွင့်လိုက်မယ်вЂ¦ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်вЂ¦ အရင်ဆုံး google.com ကိုသွားမယ်вЂ¦ ရုပ်ရှင်ရုံရယ်вЂ¦ ပြနေတဲ့ဇာတ်ကားရယ်вЂ¦ စားသောက်ဆိုင်ရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေရှာမယ်вЂ¦ အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ဘာဇာတ်ကားပြနေတယ်.. ဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်လေвЂ¦ ဒါ့အပြင် အပြီးသတ်မရွေးချယ်ခင်မှာ ရုံတွေမှာတင်နေတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ခုချင်းစီရဲ့ အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်လေးတွေကို နည်းနည်းဖတ်ကြည့်မယ်вЂ¦ ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ရုံကအပြန် အနီးဆုံးစားသောက်ဆိုင် ကိုလည်း ကြိုစဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်вЂ¦ စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့ customer reviews တွေကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဦးမယ်вЂ¦တိုတိုပြောရရင်တော့ အနည်းဆုံး ၀က်ဆိုဒ် ဒါဇင်၀က်လောက်တော့ သင်အပြင်မထွက်ခင်ကြည့်မိပါလိမ့်မယ်вЂ¦အင်တာနတ်ရေးရာ ကျွှမ်းကျင်သူအများစုအနေနဲ့ Web လောက ရဲ့ နောက်ထပ် generation အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပေါ်လာမယ့် Web 3.0 က ကျွှန်တော်တို့တွေအတွက် ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ စားချင်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုရှာဖွေရာမှာ ယခုအချိန်ထက် ပိုမိုလွယ်ကူလာစေမယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်.. ။ အများကြီးလိုက်ရှာနေရမယ့်အစား ၀ါကျတစ်ကြောင်း ဒါမှမဟုတ် နှစ်ကြောင်းလောက် သင့်ရဲ့ Web 3.0 browser မှာရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေက သူ့အလိုလိုလုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်вЂ¦။ ဥပမာပြောရရင်တော့ вЂњI want to seeafunny movie and then eat atagood Mexican restaurant. What are my options?вЂќ လို့သင်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်вЂ¦ web 3.0 ခေတ် ရဲ့ browser က သင့်အတွက် analyze လုပ်ပေးမယ်.. ဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေအတွက် Internet တစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေပေးမယ်вЂ¦ ပြီးရင် သင့်ကို result ပြန်ထုတ်ပေးမယ်вЂ¦။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး အင်တာနတ် ကွှမ်းကျင်သူပညာရှင်များအနေနဲ့ Web 3.0 ခေတ်မှာ အင်တာနတ်အနေနဲ့ ကျွှန်တော်တို့အတွက် personal assistant တစ်ယောက်လိုအသုံးကျနေပါလိမ့်မယ်လို့တောင် ယူဆနေကြပါတယ်..။ Web ပေါ်မှာတစ်ခုခုရှာတဲ့အခါတိုင်းမှာ သူကကျွှန်တော်တို့ ဘာကိုစိတ်၀င်စားတယ်ဆိုတာကို မှတ်ထားပြီးသားပါвЂ¦။ ကျွှန်တော်တို့ Web ကိုပိုများများသုံးလေလေ ကျွှန်တော်တို့ အကြောင်းကိုသူကကောင်းကောင်းသိလေ.. ကျွှန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းတွေ သိချင်တာတွေရှာတွေအခါမှာ.. ပိုပြီးတိကျသေချာတဲ့ အဖြေကိုပေးနိုင်လာလေလေဖြစ်မှာပါပဲвЂ¦။ နောက်ဆုံးပေါ့ဗျာвЂ¦ သင့်အနေနဲ့ вЂњwhere should I go for lunch?вЂќ ဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုမေးမယ်ဆိုရင်တောင် သင့်အတွက် သင်ဘာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာ မှတ်သားထားတဲ့အတွက် အကြံကောင်းပေးနိုင်မယ်.. သင်အခုရှိနေတဲ့နေရာအရပ်ကိုလည်းသူကသိနေနှင့်မယ်.. ပြီးရင်သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး စားသောက်ဆိုင်စာရင်းကို အကြံပေးပါလိမ့်မယ်вЂ¦။
web 2.0 ဆိုတဲ့စကားလုံးကအခုအချိန်မှာ လူတိုင်းကြားမိ သတိထားမိကြပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ အသေအချာနားမလည်ကြတာများပါတယ်။ တိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်လင်း အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူးလို့လည်း လူတစ်ချို့အနေနဲ့ကယူဆထားကြပါတယ်.။ web 2.0 မတိုင်ခင်မှာလည်း web 1.0 ရယ်လို့ရှိခဲ့တာမျိုးမကြားမိခဲ့ဖူးဘူးလေ..။
တချို့သောသူများကတော့ web 2.0 ကိုအသေအချာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြပါတယ်..။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင် web 2.0 လို့ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းအချက်တွေကအောက်ပါအတိုင်းပါပဲ..။
- လာရောက်လည်ပတ်သူ website visitors တွေအနေနဲ့ web pages တွေပေါ်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်စွမ်း.. လုပ်နိုင်ခွင့်ရှိခြင်း..။ Amazon အနေနဲ့ visitors တွေကို product review တွေတင်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Online Form တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ လာရောက်လည်ပတ်သူအနေနဲ့ နောက်ထပ်လာလည်ဦးမယ့်.. visitors တွေဖတ်မိစေနိုင်ဖို့ အချက်အလက်တွေကို Amazon ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားနိုင်ပါတယ်..။
- user တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာвЂ¦ ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်နဲ့ web စာမျက်နှာများကိုအဓိကအသုံးပြုလာကြခြင်း..။ ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့.. Facebook နဲ့ Myspace တို့လို Social networking ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေရဲ့ ကျော်ကြားမှုကိုကြည့်ရင် အထင်အရှားမြင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် လူအချင်းချင်းကြားမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြဲတမ်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမိနေစေပါတယ်။
- content တွေကို မျှေ၀ဖို့ လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်း။ Youtube ကအဲဒီအတွက်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဥပမာတစ်ခုပါပဲ။ Youtube member တစ်ယောက်အနေနဲ့ video တစ်ခုကို ပြုလုပ်ပြီးတော့ တစ်နာရီတောင်မကြာတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ တခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ ဆိုဒ်ပေါ်မှာ upload တင်နိုင်ပါတယ်။
- အချက်အလက်တွေရရှိဖို့နည်းလမ်းအသစ်များ။ ယနေ့အခါမှာ.. Internet အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ web page ရဲ့ Really Simple Syndication(RSS) feeds တွေမှာ subscribe လုပ်ပြီးвЂ¦ အချိန်နဲ့တပြေးညီ.. အသိပေးနေခြင်းမျိုးကို ခံစားရယူနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနတ် connection ရှိနေသရွေ့ web page ရဲ့ updates အချက်အလက်တွေကို ရနေမှာပါ။
- ကွန်ပျူတာတွေမှာတင်မကပဲ.. Internet အသုံးပြုမှု အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ပါ ကျယ်ပြန့်လာခြင်း။ လူအတော်များများဟာ cell phones ဒါမှမဟုတ် video game consoles စတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့တောင် အင်တာနတ်သုံးနိုင်နေကြပါပြီ။ အချို့သောကျွှမ်းကျင်သူများရဲ့အဆိုအရ တယ်လီဗေးရှင်းတွေ တခြား ပစ္စည်းတွေကနေတစ်ဆင့် အင်တာနတ်သုံးလို့ရနိုင်တော့မှာကိုမျှော်လင့်ထားနေကြပါပြီ။
web 1.0 ဆိုတာကို စာကြည့်တိုက်တစ်ခုလိုသဘောထားကြည့်မယ်။ သူ့ကိုကျွှန်တော်တို့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရရှိနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလိုမျိုးအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွှန်တော်တို့ user တွေကြားထဲမှာ contribute လုပ်တာမျိုး .. ရှိပြီးသားအချက်အလက်တွေကို ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲနိုင်တာမျိုးမရရှိခဲ့ဘူး..။ web 2.0 ကတော့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း user အချင်ချင်း သိကျွှမ်းလာတာတွေ ကြီးမားတဲ့အစုအေ၀း တစ်ခုလိုပါပဲ။ သတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်းရရှိဖို့လည်းအသုံးပြုတယ်။ ဒါ့အပြင် contribute လည်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။
လူအတော်များများက web 2.0 ပေါ်မှာ အခြေကျနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရဆဲမှာပဲ.. တချို့တွေကတော့ နောက်ထပ်ဘာလာဦးမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာစတင်တွေးတောနေကြပါပြီ။ web 3.0 ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးများဖြစ်လာနိုင်မလဲပေါ့။ ငါတို့ဒီနေ့သုံးနေတာနဲ့ ဘယ်လိုများခြားနားသွားဦးမလဲ..။ ပြောင်းလဲမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာမှာလား ဒါမှမဟုတ် ခြားနားမှုတွေက ငါတို့ သတိမပြုမိလိုက်လောက်အောင် အသေးအဖွဲလောက်လေးလားвЂ¦ စတဲ့မေးခွန်းမျိုးတွေကိုပေါ့..။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အင်တာနတ်ရေးရာကျွှမ်းကျင်သူတွေက World Wide Web ရဲ့နောက်ထပ်လာမယ့် generation ဟာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်လို့တွေးတောထင်မြင်နေကြပါသလဲ..။
အင်တာနတ်ရေးရာ ကျွှမ်းကျင်သူများကတော့ web 3.0 က personal assistant တစ်ယောက်ကိုယ့်မှာရှိနေသလိုခံစားမိစေမယ်လို့တောင်ယူဆနေကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်သိနေပြီးတော့ သင့်ရဲ့ဘယ်မေးခွန်းကိုမဆို ဖြေကြားပေးဖို့ ရှိနေမယ်.. သင်သိချင်တဲ့အင်တာနတ်ပေါ်ကအချက်အလက်တွေကိုလည်း အကောင်းဆုံး ထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ တွေးထင်နေကြပါတယ်။ လူအများစုက web 3.0 ကို အရမ်းကြီးမားတဲ့ Database ကြီးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်နေကြပါတယ်..။ အခုအချိန်အခါမှာ web 2.0 က internet ကိုကြားခံပြီး.. လူတွေကြားထဲမှာ ဆက်သွယ်မှုကောင်းကောင်းပြုလုပ်ပေးနိုင်နေပြီးတော့ web 3.0 ကတော့ internet ကိုကြားခံပြီးвЂ¦ သတင်းအချက်အလက်တွေကြားထဲမှာ ဆက်သွယ်မှုကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတဲ့သဘောကိုလွယ်လွယ်ကူကူနားလည်ဖို့ ဥပမာတစ်ခုကြည့်ရအောင်вЂ¦။ သင့်အနေနဲ့ အားလပ်ရက်မှာ အပန်းဖြေအနားယူဖို့ခရီးထွက်မယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ နွေးနွေးထွေးထွေးရှိတဲ့ အပူပိုင်းဒေသတစ်ခုကို သွားမယ်ပေါ့ဗျာ..။ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အတွက် budget $3,000 သက်မှတ်ထားလိုက်မယ်..။ နေလို့ထိုင်လို့ လည်ပတ်လို့ကောင်းမယ်နေရာလေးကိုသင်ကလိုချင်တယ်..။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံတော့ များများမသုံးချင်ဘူးвЂ¦။ ပြီးတော့ လေယဉ်စီးခကလည်း သင့်တင့်ရမယ် вЂ¦ အဆင်ပြေရမယ်။ အခုလောလောဆယ် ကျွှန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ Web technology အရвЂ¦ အကောင်းဆုံး အားလပ်ရက် ခရီးစဉ်တစ်ခုကိုရွေးချုယ်နိုင်ဖို့အတွက် research လုပ်ရမှာအမြောက်အများရှိနေပါလိမ့်မယ်။ သွားသင့်တဲ့နေရာကို တစ်ခုချင်းလိုက်စဉ်းစားနေရမယ်။ travel site နှစ်ခုသုံးခုလောက်၀င်ကြည့်ရမယ်..။ လေယဉ်ခတွေ ဟိုတယ်အခန်းခတွေ နှိုင်းယှဉ်ရမယ်вЂ¦။ နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်နိုင်ပါတယ်။ တချို့သော အင်တာနတ် ရေးရာ ကျွှမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရ web 3.0 နဲ့သာဆိုရင် အေးဆေးဆေးဆေးလေး ထိုင်နေယုံပဲ.. အင်တာနတ်ကသူ့ဟာသူ လုပ်စရာရှိတာ သင့်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်မှာပါတဲ့..။ Cheesy search service တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ သင်ရှာဖွေရတဲ့ parameters ကိုကျဉ်းမြောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနတ်က သူကိုယ်တိုင် အချက်အလက်စုဆောင်း ေ၀ဖန်ပိုင်းခြား analyze လုပ်ပြိး.. အကောင်းဆုံးအဖြေကိုသင့်ကိုချပြပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒီလိုဖြစ်လာစရာရှိပါတယ်вЂ¦ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ web 3.0 အနေနဲ့က Web ပေါ်မှာရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို နားလည်နေနိုင်မှာမို့လို့ပါပဲ..။ အခုလက်တစ်လောအနေအထားမှာတော့ search engine တစ်ခုကိုကျွှန်တော်တို့ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သူက ကျွှန်တော်တို့ရှာလိုက်တာကို အမှန်တကယ်နားမလည်ပါဘူး.. ကျွှန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ keywords တွေပါ၀င်နေတဲ့ ၀က်ဘ် စာမျက်နှာတွေကိုသာ ရှာဖွေပေးတာပါ။ ကျွှန်တော်တို့ဘာကိုရှာတာလဲ.. သူပြလိုက်တဲ့ web page ကကျွှန်တော်တို့ရှာတာနဲ့ ကိုက်ညီလားဆိုတာ သူမသိပါဘူး။ ဥပမာ.. вЂњSaturnвЂќ လို့ကျွှန်တော်တို့ရှာလိုက်ရင် planet နဲ့ပတ်သတ်တာ ဖော်ပြမှာဖြစ်သလို car manufacturer အကြောင်းတွေပါသူကပြပေးမှာပါ..။
web 3.0 မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် search engine ကတော့ ကျွှန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့ keyword ကိုတင်မဟုတ်တော့ဘဲ.. ကျွှန်တော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုမှုရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို အဓပ္ပါယ်ပြန်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်လို့သာ ခုနကဥပမာ အရ.. ကျွှန်တော်တို့က вЂњtropical vacation destinations under $3,000вЂќ လို့ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ရင် အဖြစ်သင့်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး ကိုသူကချပြပေးပါလိမ့်မယ်.. အင်တာနတ်တစ်ခုလုံးကိုမွှေနှောက်ပြီးတော့ ပေါ့..။
တကယ်တမ်းမှာတော့ အနာဂတ်မှာ နည်းပညာအသစ်တွေ ဘယ်လိုတစ်ဖြည်းဖြည်း ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာ ကျွှန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှတော့ အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး..။ web 3.0 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တော့ internet experts အများစုက ယေဘူယျအချက်တွေကိုတော့ သဘောတူနေကြပါတယ်။ web 3.0 က user တွေကိုသေချာပေါက် ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ကျေနပ်မှုနဲ့ အမြင်သစ်တွေကိုပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ အများစုက web 3.0 ကိုရောက်လာတဲ့အခါ ကျွှန်တော်တို့ အင်တာနတ်အသုံးပြုကြသူတိုင်း ကျွှန်တော်တို့ရဲ့ browsing history အပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ internet profile လေးတွေရှိကြမယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ ဒီ profile လေးတွေကိုသုံးပြီး.. web 3.0 က မတူညီတဲ့ browsing experience တွေကိုတစ်ဦးချင်းဆီကိုပေးပါလိမ့်မယ်..။ ဘာကိုဆိုလိုလည်းဆိုတော့ ဥပမာ သင်နဲ့ကျွှန်တော် က internet ပေါ်မှာ တူညီတဲ့ keyword တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်ပြီး search လုပ်ရင် မတူညီတဲ့ result တွေရရှိပါလိမ့်မယ်..။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲвЂ¦။
ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ software မျိုးတွေဟာ အခုအချိန်အထိတော့ mature မဖြစ်ကြသေးပါဘူး..။ အချို့ကြိုးစားနေကြပေမယ့် ကောင်းကောင်း အဆင်ပြေတာမျိုးမကြားရသေးပါဘူး။ TiVO , Pandora စတဲ့ services တွေတော့ ပေါ်လာနေပါတယ်вЂ¦ ဒါပေမယ့်လိုအပ်ချက်များစွာနဲပါвЂ¦။ အထူးသဖြင့်ကတော့ television show နဲ့ တေးဂီတသီသန့် အစရှိသဖြင့် ကန့်သန့်ချက်မျိုးတွေပါвЂ¦။ web 3.0 ကြရင်တော့ အင်တာနတ်မှာရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်အားလုံး ပါ၀င်ပတ်သက််ရမှာပါ။
အချို့သောကျွှမ်းကျင်သူများကတော့ web 3.0 ရဲ့ အခြေခံ ဖောင်ဒေးရှင်က application programming interfaces(API) ဖြစ်လာမယ်လို့ယူဆကြပါတယ်.။ API ဆိုတာက တိကျတဲ့ အချက်အလက်အရင်းအမြစ်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး.. developer တွေအနေနဲ့ application တွေကိုဖန်တီးနိုင်စေတဲ့ ကြားခံ ဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုဆိုလိုပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် web 2.0 ဆိုဒ်အချို့မှာвЂ¦ ၀က်ဆိုဒ်ရဲ့ data နဲ့ capabilities တွေကို programmer တွေကို access လုပ်ခွင့်ပေးတာမျိုးရှိပါတယ်။ Facebook ကတော့အမြင်သာဆုံးပါပဲ..။ Facebook ရဲ့ API က သူ့့ကို game ကစားရာနေရာ quizzes တွေ product review အစရှိတာတွေရဲ့ တင်ပြပေးတဲ့နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ developer တွေအနေနဲ့ program တွေကိုဖန်တီးထားစေပါတယ်။
နောက်ထပ် web 3.0 ကိုဦးတည်နေစေတဲ့ web 2.0 လမ်းကြောင်းတစ်ခုကတော့ mashup ပါвЂ¦။ mashup ဆိုတာက နှစ်ခုဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့ application နှစ်ခုကို တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပေါင်းစပ်အသုံးချတာမျိုးပါ။ ဥပမာвЂ¦ developer တစ်ယောက်က user တွေ စားသောက်ဆိုင် review လုပ်တဲ့ program ကို google map နဲ့ပေါင်းလိုက်တာမျိုးပေါ့.။ ပေါင်းလိုက်တဲ့ mashup application အနေနဲ့ restaurant reviews ကိုတင်မဟုတ်တော့ပဲ သူ့ရဲ့တည်နေရာကိုပါ user ကိုသိရှိစေဖို့လမ်းညွန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
တချို့သော ကျွှမ်းကျင်သူများကလည်း web 3.0 အနေနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းစတင်လာမှာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ ထင်နေကြပြန်ပါတယ်။ HTML ကို အခြေခံ ဘာသာစကားအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ အစား.. သူ့နေရာမှာ တခြားအသစ်သော (အခုထိမသိရသေးသော) language အသစ်တစ်ခု ပေါ်မှာမူတည်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပါပဲ။ လက်ရှိရှိနေတဲ့ web ကိုပြောင်းလဲပစ်တာထက် သုညကနေပြန်စ တာကပိုမိုလွယ်ကူမယ်လို့ ယူဆနေကြတာပါ.။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သေချာတာကတော့ web 3.0 အကြောင်းအခုပြောရတာ အယူအဆသက်သက်ဆန်လွန်းပြီးတော့ လက်တွေ့မှာတော့ သူဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာ အတိအကျပြောဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးလို့ကျွှန်တော်ကတော့ ယူဆမိပါတယ်вЂ¦။
P.S mmso.org နှင့် ကျနော့်ဘလော့မှာတင်ထားတာကိုမဖတ်ရသေးသူများအတွက် ပြန်တင်ပေးတာပါ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ref: how web 3.0 will work from howstuffworks.com
Thanks & Congratulate asagreat post.
At least, I do appreciate your good will.
You have wrote too much ... your fingers much be pained ...
Very nice post....great!!
Can you read that moemyintshein's post begin to end ?
I thought you only can read short Myanmar sentenses and it's too long for you.
Now... I wrong :2:
ဟုတ်ပါတယ် အနာဂါတ်ကာလ မှာ web ကသာလျှင် ကြီးစိုးသွားနိုင်စရာရှိတယ် လို့ califonia မှာလုပ်တဲ့ web confrence ၁ခုမှာပြောသွားတာကို ဖတ်လုက်ရပါတယ်။တကယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နုင်ဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာဘဲ။အခုချိန်မှာ web တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အမှန်တကယ် တိုးတက်မှုရှိမရှိ ဆိုတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် အတိုင်းအတာ နဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ web က ဘယ်အတိုင်းအတာထိ လွှမ်းမိုးထားနိုင်လဲ ???ဘယ်လို တိုုးတက်မှုတွေ ဆက်ရှိနေမှာလဲ??? ဆိုတာတွေကတော့ မေးစရာမလိုသလို အဖြေကလဲ သိနေမှာပါ.....
အခုချိန်နဲ့ နောက်ပိုင်းအချိန်ထိတော့ web developer တွေအတွက်တော့ အလုပ်အကိုင် တွေကတော့ ကိုယ်ကရှာနေစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်.။ကိုယ်က အမှန်တကယ် အရည်အချင်းရှိဘို့တော့ လိုတာပေါ့။
ဒီမှာတော့ web developer ဆိုတာနဲ့တင်ဘဲ company တွေက မျက်စိကျနေပြီ။
အခုဆိုရင် google ကလဲ သူရဲ့ OS ကို linux ကိုအခြေခံပြီး ထုတ်နေပြီ Cloud Computing system ကို သုံးမယ်ပေါ့။ဒါဟာဘာလဲ ဆိုရင် အလွယ်တကူပြောရရင်တော့ web နဲ့ဘဲ ဆိုင်သလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ကဲ ရေးရင်း စာလဲရှည်သွားပြီ:)
မနက်ဖြန်အထိရွှေ့လို့ရသော အလုပ်ကိုဒီနေ့ အပြီးမလုပ်ပါနဲ့ )
Web 3.0 ရဲ့ပုံစံဟာ Sementic Web ဆီကို ဦးတည်နေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ Developer တွေက Ajax ဟာ Web 2.0 ဆိုပြီး အတင်းငြင်းခဲ့ကြတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
ကိုမျိုးမြင့်ရှိန်ရဲ့ Web 2.0 အဓိပါယ်ဖွင့်ပုံကို လွန်စွာကြိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ Feature တွေကိ
ု Take it for granted လုပ်ပြီး သတိမထားခဲ့မိပါဘူး။
ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ Web 3.0 ဟာ Multiple-platform - Same protocol ပုံစံပေါ်မှာ ပိုမိုခိုင်မာလာမယ်
လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ Micro-format, RSS စတာတွေလို Standard compliant protocol တွေနဲ့ System အခြင်းခြင်း
အလိုအလျောက် exchange လုပ်လာကြတာမျိုးတွေ ပိုလို့တွေ့ရတော့မှာပါ။ (လူဖတ်တော့မှ မဟုတ်ဘူးနော်
Auto exchange ကိုပြောတာ)
ဒါပေမယ့် Web 3.0 မှာ ရှိနိုင်တဲ့ Challenge တွေကတော့
၁။ ။ ကိုယ့် မှာ ရှိတဲ့ information ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ
၂။ ။ ဘယ်သူတွေကို share လုပ်မလဲဆိုတဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်
၃။ ။ information ကိုဘယ်လောက်သာ share လုပ်မလဲဆိုတဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်တွေပါ။
ခုလက်ရှိ Web Application တွေမှာ မရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိရှိပါတယ် ဥပမာ
FaceBook မှာ မွေးနေ့ မတွေ့စေချင်ရင် off လိုက်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်မွေးနေ့ကို ကိုရွေးချယ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ မြင်စေ၊ကျန်သူတွေ မမြင်စေ ဆိုတဲ့
လုပ်ပေးလို့ရတာပဲ၊ ဘာလို့ မလုပ်သေးတာလဲဆိုတော့ ရှိသမျှ information
ကို ဘယ်လောက်ထဲ fine grain control ပေးမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပြီး technical barrier တွေကို ကျော်ဖို့အင်အား
မရှိသေးလို့ just enough ဖြစ်မယ့် နေရာမှာ ရပ်နေကြရလို့ပါပဲ။
ကိုမျိုးမြင့်ရှိန် ရေးထားတာဖတ်ပြီး စဉ်းစားစရာလေးတွေပေါ်လာပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(စာကြောင်းတွေ၊ စာပိုဒ် တွေတော့ ခွဲရေးဗျ။ ဖတ်ရခက်တယ်။)
အားပေးကြလို့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။ ကျနော်စာရေးရင် စာပိုဒ်ခွဲပုံ စနစ်မကျတာတော့ အမြဲ အပြောခံရတယ်ဗျ.. ဟီး... နောက်ဆို သတိထားပါ့မယ်...။ ဒါနဲ့ ကျနော့်နာမည် မိုးမြင့်ရှိန်ပါ.. အကိုသာသာ...